प्रार्थना र आराधना
आराधनामा प्रशंसा र सेवा समावेश गरिएको हुन्छ । यस पाठ्यपुस्तकका लेखक मोरिस विलियमले प्रार्थना र आराधनाको नयाँ जीवन हामीलाई परिचित गराएका छन् । येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सिकाउनुभएको प्रार्थनालाई नजीकबाट हेर्दा यसले यही नै देखाउँछ कि हामीहरूले प्रार्थना र आराधनालाई हाम्रो जीविकाबाट अलग गर्नसक्दैनौँ । प्रार्थना कहिल्यै पनि सकिँदैन । हामीले गर्ने हरेक कुरामा यो संगल्न छ । यस पाठ्यपुस्तकमा प्रार्थनालाई आराधनाको निम्ति तयारी, र परमेश्‍वरलाई प्रसन्‍न पार्ने र उहाँका उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्ने तरीकाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
कसरी विश्‍वासयोग्य कारिन्दा वा भण्डारे बन्‍ने भन्‍ने विषयमा लेखक जोस आर सिल्वा डेल्गाडोले देखाउनुभएको छ । एक दृष्‍टान्तमा येशू ख्रीष्‍टले दुई कारिन्दाहरूलाई दिइएको सम्पत्तिको जिम्मालाई बुद्धिमानीसाथ उचित व्यवस्थापन गर्नेलाई स्याबास दिनुभयो र उसलाई दिइएको जिम्मालाई पूरा नगर्ने कारिन्दालाई दोषी ठहर्‍यानुभयो । परमेश्‍वरले हाम्रा जिम्मामा सुम्पनुभएका थोकहरूलाई कसरी प्रबन्ध गर्ने र लगानी गर्ने भनी यस पाठले सिकाउँछ र यसरी " स्याबास, असल र विश्‍वासयोग्य नोकर, ... तँ आफ्ना मालिकको खुशीमा सहभागी हो !" (मत्ती २५:२३) ।
राज्य, शक्ति र महिमा
जीन‑बप्‍तिस्टे स्वाडगो र मारसिया मङ्गरद्वारा लिखित यो पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु परमेश्‍वरले आफ्ना पुत्र यशू ख्रीष्‍टद्वारा मानवजातिसँग बनाउनुभएको नयाँ करार वा सम्बन्धको पुस्तको अध्ययन हो । परमेश्‍वरले नयाँ करार समयमा र इतिहसभरिनै बोल्नुभएझैँ आज पनि मण्डलीलाई र संसारलाई आधिकारिक रूपमा बोल्नुहुन्छ भनी नयाँ करारको निरीक्षण वा सर्वेक्षण भनिने यस पाठ्यपुस्तकले बताएको छ । यस पाठ्यपुस्तकमा भएका सूचनाहरूले नयाँ करारका सत्यताहरू बुझ्न र यो हामीकहाँ कसरी आइपुग्यो भनी यसको विश्‍वासयोग्यतालाई बुझ्न पनि सहायता गर्नेछ। तपाईंलाई परमेश्‍वरको वचन बुझ्न र अरूहरूलाई यो सत्यता सिकाउन यस पाठ्यपुस्तकको अध्ययनले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछ ।
पालहरू, मन्दिरहरू र दरवारहरू
यस पाठ्यपुस्तकमा तपाईंले रिक हावार्डद्वारा लिखित पुरानो करार सर्वेक्षणलाई अध्ययन गर्नुहुनेछ । पुरानो करार सृष्‍टिबाट शुरू हुन्छ, यसमा जलप्रलयको निरन्तरता, र यसले परमेश्वरका छानिएका मानिसहरू,अर्थात् अब्राहामका सन्तानहरूको मुख्य विषयवस्तुलाई समावेश गरेको छ । सारा विश्वलाई आशिष दिनका लागि परमेश्वरले छान्नुभएका मानिसहरूसँग उहाँले कसरी व्यवहार गर्नुभयो भन्ने कुरालाई लेखकहरूले पुरानो करारका पुस्तकहरूलमा उल्लेख गरेका छन् । बुझ्नलाई कठिन भएका नामहरू, शब्दहरू, र घटनाहरूलाई यहाँ सम्बोधन गर्नुका साथसाथै पुरानो करार बुझ्नका लागि समावेश गरिएका महत्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
यस पाठ्यपुस्तकको विषयवस्तु होशियार र नियमित बाइबलको अध्ययन हो । पहिलो भागमा लेखिका डोरोथी जोहन्सले बाइबल अध्ययनका सिद्धान्तहरू, शब्दहरू, र अर्थहरूका तरीकाहरूलाई परिचित गराउनुभएको छ जुनचाहिँ प्रभावकारी बाइबल अध्ययनका निम्ति अत्यावश्यक छन् । पाठहरूका श्रृङ्खलाहरूले संश्‍लेषण वा पूरै पुस्तक अध्ययन तरीकालाई गहिरो रूपमा प्रदर्शित गराई जोड दिनेछन् । अध्ययनको जीवन‑चारित्रिक प्रणाली, विषयगत प्रणाली, र भक्तिगत प्रणालीलाई अन्तिम खण्डमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । यस पाठ्यपुस्तकका धेरै भागमा कसरी अध्ययन गरिनुपर्छ भनी मानसिक बुद्धिलाई जोड दिइएको भए तापनि यो पुस्तकको मुख्य उद्देश्यअनुसार विद्यार्थीको आत्मिक विकास होस् भनी निरन्तर जोड दिइएको छ । उद्देश्य प्राप्‍तिका लागि बाइबलको प्रणालीगत अध्ययनको महत्वलाई पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।
बाइबलमा भएका शिक्षाहरू विषयगत रूपमा प्रस्तुत गरिएका छैनन् भनी तपाईंले पत्ता लगाइसक्‍नुभयो होला । उदाहरणको लागि, उत्पत्तिको पुस्तकले हामीलाई परमेश्‍वरको बारेमा पूर्ण व्याख्या दिएको छैन, नता अरू कुनै एउटै पुस्तकले यस विषयमा पूर्ण रूपमा बताएको छ । बाइबल अध्ययनगर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तरीकाचाहिँ खास विषयसँग सम्बन्धित सबै शिक्षाहरूलाई पत्ता लगाउनु हो । लेखकहरू फ्लोवाइड ऊडवर्थ र डेविड डंकनद्वारा लिखित यस पुस्तकलले विश्‍व र यसका शासकका बारेमा, मानवजाति र मानव विकासको निम्ति परमेश्‍वरले छान्‍नुभएको संरचनाको बारेमा पवित्रशास्त्र बाइबलले भनेको कुरालाई प्रणालीगत रूपमा अध्ययन गराउनेछ । भविष्यको बारेमा बाइबलले भनेको कुरालाई पनि विद्यार्थीहरूले पत्ता लगाउनुपर्नेछ ।
डेविड डंकनद्वारा लिखित यस पाठ्यपुस्तकको मुख्य विषयवस्तु उद्धार हो, र कलवरीमा किनिएको सबैथोक यसमा समावेश गरी यसको परिभाषालाई बृहत् बनाइएको छ । उद्धारमा बितेका समयका पापहरूको क्षमा, वर्तमान समयमा पापको शक्तिद्वारा छुटकारा मात्र होइन, तर भविष्यमा पापबाट भएको दबाबको विरूद्धमा प्राप्‍तहुने सुरक्षाजस्ता कुराहरू पनि समावेश गरिएका छन् । क्रूसमा ख्रीष्‍टले उपलब्ध गराउनुभएको उद्धारद्वारा मानिसका सबै सम्पूर्ण आत्मिक आवश्यकताहरू पूरा भएका छन् ।
सेवामा ख्रीष्‍टियान मण्डली
क्रूसमा भएको ख्रीष्‍टको मृत्युमा नै उद्धारको योजना सकियो भनी तपाईंले विचार गर्नुभएको होला । तथापि, येशू आफैले नै संसारलाई उद्धारगर्ने आफ्नो सेवा मण्डलीलाई दिनुभएको छ । ख्रीष्‍टद्वारा दिइएको महान आज्ञा नै परमेश्‍वरको निम्ति काम गर्नलाई मण्डलीको अधिकार हो भनी लेखक जेसी मिरन्डाले हामीलाई सिकाएका छन् । यस कामको निम्ति मण्डलीलाई मात्र एकलै छोडिएको छैन, किनभने हामीलाई सहायता गर्नका निम्ति ख्रीष्‍टले आफ्ना पवित्र आत्मालाई पठाउनुभएको छ । परमेश्‍वरको उद्धारको योजना पूरा गर्नका लागि पवित्र आत्माले हामीमा र हामीद्वारा काम गर्नुहुन्छ ।
नयाँ मण्डलीहरू शुरू गर्नु
तपाईंले आफ्नो साक्षी अरूहरूसँग बाँडिसक्‍नुभएको होला र स्पष्‍ट प्रकारले मुक्तिको सन्देश दिनसक्‍नुपर्छ भनी तपाईंले महसूस पनि गर्नुभएको होला । प्रश्‍न सोध्‍नेहरूलाई वा मुक्तिदाता र प्रभुका रूपमा येशू ख्रीष्‍टलाई ग्रहण गर्न कठिनाइको अनुभूति गरिरहेकाहरूलाई जवाफ दिनका लागि तपाईंलाई सक्षम तुल्याउन बाइबलका खण्डहरूलाई तपाईंले कण्ठ गर्नुभई कुनै पनि बेला त्यसलाई प्रयोग गर्नसक्‍ने हुनुपर्छ । लेखकहरू रबर्ट र इवेलिनले उद्धारको बारेमा तपाईंले जानिसक्‍नुभएको कुरालाई बुझी ख्रीष्‍टियान भएको आनन्दको बारेमा अरूहरूलाई बाँडी परमेश्‍वरको सेवाको आनन्द प्राप्‍त मनाउन सहयोग गर्नुहुनेछ ।
जीवनका समस्याहरूको समाधान
जीवनका समस्याहरूका उत्तरहरूका निम्ति हामी कहाँ जानसक्छौँ के तपाईंलाई थाहा छ ? लेखिका डोरोथी जोहन्सले तपाईंका समस्याहरूलाई विजयतामा परिवर्तन गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ । हामीले सामना गर्नुपर्ने केही समस्याहरूका निम्ति त्यहाँ कुनै स्पष्‍ट समाधान छैन । तथापि, हामीकहाँ आउने धेरै समस्याहरूका समाधान पत्ता लगाउनका निम्ति बाइबलले हामीलाई मार्ग‑निर्देशन दिएको छ, र हामी धेरै समस्याहरूबाट कसरी जोगिन सक्छौँ भन्‍ने बारेमा पनि यसले हामीलाई देखाउँछ । तपाईंले यस पाठ्यपुस्तकलाई अध्ययन गर्नुहुँदा र समस्या समाधानका सिद्धान्तहरूलाई प्रयोग गर्नुहुँदा, तपाईंलाई सहायता गर्नुहुने समस्या समाधानकर्ता येशू ख्रीष्‍टलाई तपाईंका आफ्ना समस्याहरू दिनुहुँदा तपाईंले अचम्मको आशिष पत्ता लगाउनुहुनेछ ।
मानिसहरू, कामहरू र लक्ष्यहरू
धेरैजसो सिक्‍ने कुरा दुई किसिममा हामीकहाँ आउँछः नमूनाहरूबाट र सिद्धान्तहरूबाट । यस पाठ्यपुस्तकमा लेखक विलिइ डेविसले नेतृत्वपनलाई दुवै पक्षबाट विश्‍लेषण गरी परमेश्‍वरका छानिएका धेरै अगुवाहरूका उदाहरणहरूलाई हेरेका छन् । अगुवापन वा नेतृत्वपनको मुख्य विषयवस्तुलाई प्रयोग गरी बाइबल अध्ययन गर्ने मौका विद्यार्थीहरूले प्राप्‍त गर्नेछन्, जहाँ उनीहरूले विभिन्‍न व्यक्तिहरूका जीवनलाई अध्ययन गर्नेछन् । मानव विकास र अगुवापनका अति उच्‍च सिद्धान्तहरूलाई सिक्‍नुभई, यी सिद्धान्तहरूलाई ख्रीष्‍टियान विश्‍वास र व्यवहारसँगको मिलापमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ सो पनि तपाईंले अध्ययन गर्नसक्‍नुहुनेछ ।
साँचो चरित्र कुनै दुर्घनाबाट हुँदैन । पवित्र आत्माले विश्‍वासीमा उहाँको फल उत्पादन गर्नुहुँदा ख्रीष्‍टियान चरित्रको विकास हुन्छ । गलाती ५:२२‑२३ मा वर्णन गरिएको पवित्र आत्माको फल हाम्रा जीवनमा पवित्र आत्माको बासको उपस्थितिको नतीजा हो । पाठ्यपुस्तकका लेखक एन्टोनियो गिल्बर्टो डा सिल्वाले गलाती ५ र अन्य सम्बन्धित बाइबल खण्डहरूबाट व्यावहारिक अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन् । यस पाठ्यपुस्तकले प्रेम, आनन्द, शान्ति, धीरज, दया, भलाइ, विश्‍वासयोग्यता, नम्रता, आत्म‑संयम जस्ता आवश्यकीय गुणहरूका विकासमा र ख्रीष्‍टियान सम्बन्ध र सेवामा तिनीहरूका फाइदाका बारेमा जोड दिन्छ।